भियतनाममा 54 XNUMX जातीय समूहहरूको CHO आरओ समुदाय - भियतनाम अध्ययनको पवित्र भूमि
CHO RO का २,26,455 भन्दा बढी बासिन्दाहरू छन्। तिनीहरू मध्येको ठूलो अंश बसोबास गर्दछ दांग नाई1 प्रान्त र बाँकी बसोबास गर्ने बिन थुन2 प्रान्त तिनीहरूलाई पनि भनिन्छ Do-No र चाउ-होइन। CHO आरओ भाषा को हो सोम खमेर3 समूह, नजिक Ma र Xtieng भाषाहरु।
विगतमा, CHO आरओले प्रायः स्ल्याश र बम खेतीको अभ्यास गर्थ्यो। उनीहरू गरिब र अस्थिर जीवन बिताउँथे। भर्खर, तिनीहरूले मिल्पास वा डुब्ने खेतहरूमा स्थिर खेती अपनाए। यसका लागि धन्यबाद, तिनीहरूको जीवन सुधारिएको छ। पशुपालन, शिकार, भेला र माछा मार्ने कामहरू CHO RO व्यक्तिको जीवनमा अपरिहार्य गतिविधिहरू हुन्। बास्केट्री र काठ लेखन उनीहरूको मुख्य हस्तकला हुन्।
CHO आरओ महिला लु lung्गिस लगाउँथे, कपाल र शर्ट लगाएका पुरुषहरू उनीहरूको टाउकोमा तानिन्थे। जाडोमा तिनीहरूले कम्बलले छोपे। ढिलोसम्म उनीहरूले यो अपनाएको छ Kinh4 पोशाक को शैली। यद्यपि तिनीहरूको पीठ र तांबे वा चाँदीको गहनाका डोजरहरूको कारण उनीहरू चिन्न सकिन्छ।
पहिले, CHO आरओ घरहरू अन-स्टिल्टमा बस्थ्यो र घरको एक छेउमा राखिएको भर्या .बाट भुइँमा पहुँच गर्न। हालसालै, तिनीहरू भूमिमा बनाइएको घरहरूमा सरेका छन्। भित्री केही ग some्गहरू र जारहरूसँग सरल छ जुन मान मानिन्छ। हालसालैका वर्षहरूमा धेरै परिवारले बाइक वा मोटरबाइक किन्न सक्थे।
पतिपत्नी र वैवाहिक रीति-रिवाज दुबै विवाहमा महत्वपूर्ण छन्, त्यस व्यक्तिको परिवारले विवाहको प्रस्ताव राख्छ तर विवाह समारोह सधैं दुलहीको घरमा आयोजित हुन्छ। मानिस आफैंको घर बनाउनु अघि धेरै वर्षसम्म उसकी पत्नीको घरमा बस्नु पर्छ।
सीएचओ आरओले मरेकाहरूलाई खाली खाली ट्र -्क-कफिनमा गाड्दछ। चिहान अर्धवृत्ताकार ट्यूमुलसको साथमा छ। बन्नलको तीन दिन पछि, चिहान खोल्ने समारोह हुन्छ।
CHO आरओ मा विश्वास गर्दछ कि सबै चीजहरुको आत्मा हुन्छ र आत्माहरु अदृश्य नियन्त्रण हो जसले मानिसलाई पूजामा संलग्न गराउँछ र त्यसलाई वर्जित गर्दछ। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण ज the्गल र भातका देवताहरूको पूजा गर्ने विधिहरू हुन्।
सीएचओ आरओ लोककथा प्रचुर मात्रामा छ। बाजा साउन्ड-बक्सको साथ स्ट्रिंग इन्स्ट्रुमेन्ट, बाँसुरीहरू सात गाongs्गहरूको सेट समावेश गर्दछ। सीएचओ आरओ अल्टेनेटिव गीतहरू धेरै मौलिक छन्।
डो Dong नाईमा CHO आरओ उत्सव (स्रोत: VNA प्रकाशन घर)
◊ भियतनामी संस्करण (vi-VersiGoo): Nguoi BA NA trong Cong dongd54 दान toc anh Em o Viet Nam.
◊ भियतनामी संस्करण (vi-VersiGoo): नुगुइ BRU-VAN KIEU ट्राँग क d्ग डong्ग Dan 54 दान टक anh Em o भियतनाम.
◊ भियतनामी संस्करण (vi-VersiGoo): Nguoi CHO RO trong कांग डोंग Dan 54 दान toc anh em o भियतनाम.
(देखिएको 29 पटक, 1 आज भ्रमणमा)
पोस्ट दृश्यहरू: 116
← BRU-VAN KIEU भियतनाममा E 54 जातीय समूहहरूको समुदाय
भियतनाममा E 54 जातीय समूहहरूको CHAM समुदाय →
भियतनाममा 54 XNUMX जातीय समूहहरूको CHU RU समुदाय
टिप्पणीहरू बन्द भियतनाममा E 54 जातीय समूहहरूको CHU RU समुदायमा
आजको भ्रमण: 492
अन्तिम7दिन भ्रमणहरू: 7,562
कुल भ्रमण: 82,094